Soo Ifbaxa, Cimriga iyo Geerida Fikradaha – Maandoon
July 22, 2017 Mohamed Adaani 0 Comment
Waxaynu rumaysan nahay, Haddii aan muslim nahay, in wax walba oo Alle kasoo hara ay jiri karaan muddo kooban. Dhirirka muddadaas inta uu la egyahay waxaa jaan goynaya duruufo iyo xaalada gaar ah. Duruufahaas iyo xaaladahaasu waxay si wada jir ah uga yimaadaan dadka curiyay fikradaha, macaamiisha fikradaha, wadciga guud ee xilligaa jira- the larger context iyo sida ay fikraddu u waafaqsan tahay, ama uga soo horjeedo sharciyada daa’imka ah/joogtada ah- السنن الكونية. fikradaha iyo aydiyoolajiyadaha qaar way dhicisoobaan, qaar way saqiiraan, qaar baa xoogaa cimriya, qaarna kumannaan sano ayay socdaan. Fikir walba waxaa la curiyaa xilli, waxaana curiya dad xilligaa nool. Dadkaasu waxay wax ku dhisanayaan ilbaxnimada iyo aqoonta ay haystaan xilliga uu fikirkaa soo ifbaxayo. Haddii ay fikraddu tahay mid dabacsan, waafaqsanna sharciyada joogtada ah waxay u badan tahay in ay guuleysato. Ha yeeshee, guusha kadib, waxaa lagama maarmaan in si joogta ah loola daba taagnaado nadiifin iyo cusboonaysiin. Haddii aaney taa dhicin, aydiyoolajiyadaa waxaa u dambeeya qashin qubka.
Tusaale, Suufiyadu markii ay qatar dareemeen dhamaadkii qarnigii hore waxay qoteen dhufaysyo aan micno lehayn intii ay isbeddel dhab ah la imaan lahaayeen, kana guuri lahaayeen qubuuraha iyo xatraynta aan waxba tarayn. Waxay ku guuldareysteen in ay fahaamn guuxa iyo isbeddelka macaamisha, waxayna ka dhamaan waayeen in ay ku celceliyaan “bidco iyo gar dheer baa soo socota”. Dhab ahaantii, waxaa hor taalay fursad qaaliya oo ay dadkoodi kusii haysan kareen, laakin waxay waayeen nadiifintii iyo cusboonaysiintii joogtada ehayd. Qaladkii mid lamid ah waxaa haatan ku socda Salafiyada oo ayaguna dhufayso aan micna badnayn ka qodaya aag walba, kuna haaya bidco, munaafaqiin, iyo takfiir baa yimid. Waxaa habboon in la fahmo guuxa macaamisha, isbeddelka socda iyo wadciga guud ee markaa jira. Waa dhab in ay Salafiyada qaar waxyaaba badan kasoo qaan gaareen oo isbeddel muuqda uu jiro, balse waxay qabaan ad adeeg lafaha uga jira oo ka hor taagan in ay si dabacsan u baaraan qaladaadkooda, fahmaanna in aan bulshadu wada ehayn Salafiya.
← Xadiiska firqada badbaadaysa .. Culumooy jannadu ma ciriiri baa?
Xiisaddii Aan Dhammaadka Lahayn! →